Osprey ဗီဒီယိုစက်တင်ဘာလ 28th thru Now ကိုရရှိနိုင်သောပရိုမိုရှင်းစျေးနှုန်းရှိထား! - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့်သတင်းများ NAB ပြရန်။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
Home » အသားပေး » Osprey ဗီဒီယိုစက်တင်ဘာလ 28th thru Now ကိုရရှိနိုင်သောပရိုမိုရှင်းစျေးနှုန်းရှိထား!
Osprey ဗီဒီယိုစက်တင်ဘာလ 28th thru Now ကိုရရှိနိုင်သောပရိုမိုရှင်းစျေးနှုန်းရှိထား!
Osprey ဗီဒီယို စက်တင်ဘာလ 28th thru ယခုအချို့သောအံ့သြဖွယ်အထူးနှုန်းများစျေးနှုန်းရှိပါတယ်။ သငျသညျအဆုံးအသုံးပြုသူသို့မဟုတ် System Integration များမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, rackmount နှင့်ကွင်းဆင်းမော်နီတာ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်မည်သည့်ထူးခြားသောလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အဖြေရှင်းချက်အဆုံးသတ်မည်သည့်အဆုံးမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ကဟာယပူဇော်သက္ကာ checkout!
အဆိုပါ Osprey RM12G-1 12G-SDI4ဇာတိ resolution ကို×စစ်မှန်သော 3840 featuring တစ်ဦး 2160K မော်နီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြံ့ခိုင်ထမ်းကိစ္စတွင်အတွင်း၌တပ်ဆင်ထားလယ်မော်နီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သို့မဟုတ်တစ်ချိန်က 19 "Rackmount Monitor အဖြစ်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဆိုပါ4SDI သွင်းအားစုနှစ်ခု 12G rated ဆက်သွယ်မှုပေါင်း 3G မှာ rated နောက်ထပ်နှစ်ဦး၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသော link ကို 12G SDI ဗီဒီယိုအဖြစ် Dual-6G နှင့်ကို Quad 3G 4K60 ဗီဒီယိုထောက်ခံပါတယ်။ quad mode ကိုနှစ်ဦးအတွက်နမူနာကြားညှပ်အဖြစ် Square ကိုတိုင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ အားလုံး SDI သွင်းအားစုတခု Loopout ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ SDI သွင်းအားစု RM12G-1 အပြင်လည်းလေးထောကျပံ့ HDMI သွင်းအားစု, HDMI2.0 4k60 ပေါင်း 1.4K4 မှာ rated သုံး HDMI30 မှာ rated တဦးတည်း။ တစ်ဦးကနားကြပ်ကို output အဖြစ်ပေါင်းစည်းစပီကာအသံစောင့်ကြည့်မှုစွမ်းရည်များကိုပေး။ MSPR- $ 2490 Now- $ 2241.00
အဆိုပါ Osprey RM3G-2 SDI ထောက်ပံ့နေတဲ့ Dual-Rackmount ု့ကပ်ရေးဖြစ်ပါသည်, HDMI နှင့်အင်နာလော့ဗီဒီယို သွင်းအားစုအဖြစ် Tally ။ Loopouts အားလုံးထည့်သွင်းမှုများအဘို့အထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အပြည့်အဝ Size ကို BNC ဗီဒီယို Connections ကို (အားလုံးနှင့် HDMI) Loopouts နှင့်အတူ Loopouts / 2x စိတျအပိုငျးမြားနှငျ့ Loopouts / 3x Composite နှင့်အတူ Loopouts / 2x HDMI1.3 နှင့်အတူ 2x 2G-SDI featuring ။ တပ်ဦး Panel ကိုထိန်းချုပ်မှုများဗီဒီယို Input အားရွေးချယ်ရေး, Display ကို Adjustments, Tally ကိုညွှန်ပြချက်အလင်းအိမ်, aspect ratio, Signal ဆုံးရှုံးမှုအရောင်ဘား, System ကိုချိန်ညှိမှုများရှိသည်။ တစ်ဦး2တစ်နှစ်အာမခံပါဝင်သည်။ MSRP- $ 690.00 Now- $ 552.00
အဆိုပါ Osprey MVS-8 8G-SDI ထောက်ပံ့ထားတဲ့3Channel ကို Rackmount ု့ကပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအသံဘားနှင့်အချိန် Code ကို Display ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ Loopouts နှင့်အတူ 8x 3G-SDI featuring ကဗီဒီယို Connections ကို (အားလုံးအပြည့်အဝ Size ကို BNC) ။ SDI ဗီဒီယိုစံချိန်စံညွှန်း (အဆင့်က) 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL / 720p50,59.94,60 / 1080p23.98,24,25,29.97,30,50,59.94,60 / 1080psf 23.98,24 / 1080i50,59.94,60 ဖြစ်ကြသည်။ သို့ကျဆင်းလာ switch သည်ယူနစ်၏နောက်ကျောအပေါ်ထိန်းချုပ်ထား။ display 8x2"TFT LCD ကို / ဆုံးဖြတ်ချက် 640 × 240 (1920 × 1080 မှတက်ထောက်ခံပါတယ်) / aspect ratio4features:3/ 300 Contrast: 1 / Angle 80 ကိုကြည့်ရှုခြင်း။ MSRP- $ 1490 Now- $ 1341.00
အဆိုပါ မြင်ကွင်းစုံများနှင့် PIP mode ကိုထောက်ပံ့ Osprey RM3G-4K 3G-SDI စစ်မှန်သော featuring 3840 2160 ဇာတိ resolution ကို×။ ဒါဟာကြံ့ခိုင်ထမ်းကိစ္စတွင်အတွင်း၌တပ်ဆင်ထားလယ်မော်နီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သို့မဟုတ်တစ်ချိန်က 19 "Rackmount Monitor အဖြစ်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဒါဟာ 3G SDI, HDMI2.0, DVI အဖြစ် VGA ဗီဒီယိုသွင်းအားစုထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါလေး HDMI သွင်းအားစု 2.0K4 မှာ rated တဦးတည်း HDMI60 input ကိုပေါင်း 1.4K4 မှာ rated သုံး HDMI30 ၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ တစ်ဦးအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်အဖြစ်ကလည်းသည်ညီမျှမှုပေး Audio Input ကိုထောက်ခံပါတယ်။ တစ်ဦးကနားကြပ်ကို output အဖြစ်ပေါင်းစည်းစပီကာအသံစောင့်ကြည့်မှုစွမ်းရည်များကိုပေး။ မြင်ကွင်းစုံရွေးချယ်စရာနှစ်ခု / ကို Quad ကြည့်ရန်နှင့် PIP Mode ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှုတို့ပါဝင်သည်။ အားလုံးထည့်သွင်းမှုများဘေးထွက်-by-Side Dual-ကြည့်ရန်ထံမှအထိအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသော Layout Options ကိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Quad ကြည့်ရန်မှတက် PIP ။ တပ်ဦး Panel ကိုထိန်းချုပ်မှုဗီဒီယို Input အားရွေးချယ်ရေး, Display ကို Adjustments ပါဝင်သည်, Tally ကိုညွှန်ပြချက်အလင်းအိမ်, မြစင်တာနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးညွှန်မှတ်, aspect ratio, System ကိုချိန်ညှိမှုများ, H ကို / V ကိုနှောင့်နှေး, ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး, Underscan, Signal ဆုံးရှုံးမှုအရောင်ဘား, မှန်ဘီလူး, Image ကို Flip, PIP, Multi ကြည့်ရန် ။ MSRP- $ 1090.00 Now- $ 981.00
အပြည့်အဝ line ကိုကြည့်ရှုပါ Osprey ဗီဒီယို မော်နီတာမှာ www.ospreyvideo.com/index.php ။ ထုတ်ကုန် Tab ကိုလက်အောက်တွင်။ ထို့အပြင်သှားဖို့သေချာပါစေ Osprey IBC7, RAI အမ်စတာဒမ်မှာ 19.D2018 ရပ်။ စက်တင်ဘာလ 14th-18th ကနေပြပွဲ!
#NABSHOWNY: Broadfield အနီရောင်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အတူဖြန့်ဖြူးမိတ်ဖက်ကြေညာ - အောက်တိုဘာလ 17, 2018
#NABSHOWNY အဆိုပါဟု ICG ပြော Panel ကိုတင်ပြကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့: ဘယ်လို Unscripted ရုပ်မြင်သံကြား Multi-Cam Reinventing နေပါသည်! - အောက်တိုဘာလ 15, 2018
#IBC2018 အဆိုပါ Show ကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့! - သြဂုတ်လ 28, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2018-08-27
ယခင်: Vislink Volvo သမုဒ္ဒရာလူမျိုးမှတရားဝင်ပေးသွင်းအဖြစ်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာပေး
နောက်တစ်ခု: LiveU ရုရှားနိုင်ငံအတွက် 2018 ပိုးလမ်းဟာ Off-လမ်းမကြီးပြိုင်ပွဲကနေတိုက်ရိုက်ရှစ်နေ့ရက်များဆောင်ကြဉ်း
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2018 (254) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (398) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Osprey ဗီဒီယိုစက်တင်ဘာလ 28th thru Now ကိုရရှိနိုင်သောပရိုမိုရှင်းစျေးနှုန်းရှိထား!" ။ https://www.broadcastbeat.com/osprey-video-has-promo-pricing-available-now-thru-september-28th/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။